Zvakajairika Zvikanganiso Mabhizinesi Anoita Paunenge Uchisarudza A Yekushambadzira Yekushandisa Platform | Martech Zone
A kushambadzira otomatiki chikuva (MAP) chero software inogadzira zviitiko zvekushambadzira. Iwo mapuratifomu anowanzo kupa otomatiki maficha pane email, zvemagariro midhiya, lead gen, yakananga tsamba, yedhijitari kushambadzira chiteshi uye avo masvikiro Iwo maturusi anopa epakati kushambadzira dhatabhesi yeruzivo rwekushambadzira saka kutaurirana kunogona kutariswa uchishandisa kukamura uye kuita kwako pachako
Iko kune kudzoka kukuru kwekudyara kana kushambadzira otomatiki mapuratifomu akaitwa nemazvo uye zvakazara zvakasimbiswa; zvisinei, mabhizinesi mazhinji anoita zvikanganiso zvakakura pavanosarudza chikuva chebhizinesi ravo. Heano ayo andinoramba ndichiona:
Mistake 1: MAP Haisi Yega Nezve Email Kushambadzira
Kana kushambadzira otomatiki mapuratifomu akatanga kugadzirwa, iyo yepakati tarisiro yeazhinji yaive yekugadzirisa email kutaurirana. Email chiteshi chisingadhuri chine yakakura ROMI uko mabhizinesi anogona kuteedzera uye kurondedzera mashandiro avo. Zvisinei, email haisi yega yepakati zvakare. Kushambadzira ndekwekutumira chaicho mutengi meseji chaiyo panguva yakakodzera - uye MAPs anogonesa izvi.
muenzaniso: Ini munguva pfupi yapfuura ndakabatsira mutengi kumhanyisa yavo webinar vachishandisa yavo yekushambadzira otomatiki chikuva. Kubva kunyoresa chiitiko chisati chaitika, kupinda kwezuva rezviitiko, kuenda kune yekupedzisira-yechiitiko yekutevera - yaive otomatiki maitiro kune ese maemail uye akananga tsamba dzekutumira. Iemail kushambadzira otomatiki chikuva chete kwaisazotibatsira kusangana nezvinangwa zvedu.
Mistake 2: Iyo MAP Haisi Kuenderana Neakakura Ekushambadzira Zvinangwa
Mumakore angu ezviitiko anoshanda pamwe nevatengi, mutengi wega wega aive nemafungiro avo papuratifomu yavo. Kazhinji kazhinji, iyo-C-danho-gadziriro-musarudzo aivimba zvakanyanya pamutengo wepuratifomu uye hapana chimwe chinhu. Uye kana tichiongorora yavo yekushambadzira tekinoroji, takaona kuti mapuratifomu aishandiswa sei - kana zvakanyanya - kusashandiswa zvachose.
Chinhu chekutanga chinofanirwa kugara chichibvunzwa kana uchisarudza MAP ndechekuti:
Ndezvipi zvako zvinangwa zvekushambadzira mumwedzi mitatu?
Kushambadzira otomatiki hachisi chinhu chinoshamisira chebuzz kana iri sirivheri bara. Icho chishandiso chekukubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako zvekushambadzira. Naizvozvo, uchigara uchibvunza izvo zvaunoda kuzadzisa uye kumisikidza yako MAP kuti ienderane zvakananga nezvinangwa zvako zvekushambadzira uye kuyera ako akakosha ekuita zviratidzo (KPIs).
muenzaniso: E-commerce mutengi anoda kuwedzera mari kuburikidza neemail chiteshi nekuti iwo chete ndiwo magero ebhizinesi arikushandisa izvozvi uye vane hombe dhatabhesi. Vanogona kunge vasingatombodi kushandisa michina… email service provider (ESP) yakabatanidzwa neane ruzivo rwekutengesa email vangangokwanisa kuzadzikisa zvese zvabuda. Ndeipi poindi yekuparadza kanopfuura ka5 bhajeti yekushandisa MAP ichiita zvakafanana?
Mistake 3: MAP Implementation Mari Dzinotarisirwa
Chikwata chako chine ruzivo rwakadii? Tarenda inogona kuve inonyanya kukosha kana uchiisa mari muMAP, asi inowanzo kufuratirwa nemabhizinesi mazhinji ari kuita sarudzo. Kuti uwane zvinangwa zvako zvekushambadzira, unoda mumwe munhu anogona kunyatso gadzira pachikuva uye nekuita mushandirapamwe nacho.
Vanopfuura hafu yevatengi vangu vakasarudza chikuva chisina tarenda remukati kuti riwedzere. Nekuda kweizvozvo, ivo vanozopedzisira vabhadhara agency yekushambadzira kuti igone kuitisa. Mari iyoyo inoderedza kudzoka kwekudyara uye inogona kutoita kurasikirwa nayo. MaAgency anowanzo kuve akakura mukukubatsira iwe neako MAP kuitisa, asi iri mutengo unodhura kune mazhinji madiki kusvika epakati-saizi mabhizinesi ekuashandisa iwo achienderera.
Mamwe mabhizinesi anosarudza kukwidza-hunyanzvi timu yavo yemumba. Munguva yebhajeti maitiro, zvakadaro, vazhinji vanokanganwa kuronga kudzidzisa mutengo mubhajeti ravo rekushambadzira. Mhinduro yega yega inoda hunyanzvi hwakakosha; nokudaro, mari yekudzidzira inosiyana. Marketo, semuenzaniso, iri mushandisi-inoshamwaridzika mhinduro ine yakakosha yekudzidzira mutengo weinenge $ 2000 AUD muAustralia. Neimwe nzira, Salesforce Kushambadzira Cloud kudzidziswa kuri pachena pa Trailhead.
Funga nezve zvinodhura zvezvinhu zvako zvevanhu uye kudzidziswa kwavo kana iwe wafunga pachikuva.
Kukanganisa 4: MAP Kasitoma Chikamu Chikamu Chinoenda Chisingashandiswe
MAP inogona kupatsanura tarisiro yako uye vatengi chero nzira yaunoda nayo. Izvi hazvisi chete nezvezvinhu zvemadhata zvaunazvo, asi zvakare zvakaringana kunongedza uko mutengi ari parwendo rwavo kana kushambadzira lifecycle. Kutumira iwo chaiwo meseji panguva chaiyo zvinoenderana nehunhu hwevatengi hwavo kuchawedzera kukosha kwevatengi… kutyaira kuwedzera kune yako ROI.
Pamusoro pezvo, vazhinji vatengesi veMAPP vanoita A / B kuyedza kugadzirisa mhedzisiro yemushandirapamwe. Izvi zvinowedzera mhedzisiro yako yekushambadzira… nekuvandudza nguva uye mameseji auri kutumira mutengi wako. Kutarisa zvikamu zvevatengi uye maitiro avo, uye kuganhura yega yega huwandu hwevanhu kunotora mukana wehunhu musiyano kune vatengi.
Kusarudza kurudyi MAP mhinduro hakuna kumbove kuri nyore uye kufunga kunofanirwa kuitwa kupfuura mutengo wepuratifomu. Ehezve, kune zvimwe zvikonzero zvakawanda yako MAP kudyara kunogona kusaburitsa… asi zvirinani izvi zvakajairika zvikanganiso zvichavandudza mikana yako yekuziva zvizere kudyara kwako!
Kana iwe uchida rumwe rubatsiro pakusarudza imwe, ndapota svika uye tinofara kubatsira.
Tags: maitiro evatengiemail kushandisa michinaemail marketing automationchiitiko kushambadzira otomatikikey performance zviratidzomepukushambadzira otomatiki chikuvaKushambadzira Kudzidziswamobile marketingRoyi